Manchester City oo ku dhow inay la soo wareegto xiddig ka tirsan Kooxda Atletico Madrid – Gool FM
(Manchester) 03 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay ku dhowdahay inay la soo wareegto daafaca Atletico Madrid ee Renan Lodi.
22-sano jirkaan ayaa hoos uga dhacay xulashada safka hore ee tababare Diego Simeone xilli ciyaareedkan, waxaana uu saftay kaliya siddeed kulan oo horyaalka La Ligaha Spain ah, isagoo ku soo bilowday safka hore shan ka mid ah kulammadaas.
Lodi ayaa heshiiskiisa haatan ee garoonka Wanda Metropolitano waxa uu ku eg yahay sanadka 2025-ka laakiin, boos joogto la’aanta ka haysata inuu ku bilawdo safka sare ee La Liga ayaa loo maleynayaa inuu ka dayanayo inuu raadsado koox cusub mustaqbalka dhow.
Sida uu warinayo Wargeyska Daily Mail, Tababaraha Kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa aad ugu dhow inuu daafacan garabka bidix ee Lodi la soo wareego si uu tartan u geliyo Benjamin Mendy.
Si kastaba ha noqotee, waxa ay wararku intaa ku darayaan in heshiiska Lodi ee bisha Janaayo aysan u badnayn inuu dhaco sababo la xiriira saameynta Kocona Fayras iyo awoodda dhaqaale ee kooxuhu suuqa ku bixin karaan.
Lodi ayaa u saftay 58 kulan kooxda Atletico Madrid tan iyo markii uu xagaagii la soo dhaafay kaga soo biiray naadiga Athletico Paranaense, isagoo dhaliyey hal gool isla markaana caawiyey afar kale.
Kooxda Juventus oo shaacisay liiska xiddigaha kulanka caawa ay kala hortagayso Udinese... (Ronaldo oo hoggaaminaya & Morata oo maqan)